Ciyaarta Farshaxameeyayaasha ayaa sheegaya in xilligii 8 uu ahaa qashin - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo "Game of carshiga" Aktarka ayaa ku dhawaaqay xilli 8 inuu yahay been-abuur - BGR
Natalia Tena waxay daawatay dhamaan sideedii iyo sideedii dhamaadka Game of carshiga, iyo sida kuwa badan oo kale, waxyaabo badan oo aan ka farxin iyada. Xitaa wuxuu gaadhay meeshii, intii ay daawanaysay, saaxiibkeed ugu dambeyntii waa inuu ka tago maxaa yeelay waxay siisay muddo hal saac ah oo ku saabsan sida ay uga xanaaqsan tahay wixii ay aragtay. Ka dib bixitaankeedii saaxiibadeed, Natalia ayaa markaa u yeedhay saaxiib. Ku dheji dabool.
Runtii kaligeed maahan. Sida aan soo xusnay dhamaadka xilli ciyaareedkii 8 wuxuu ahaa showga ugu hooseeya ee la qiimeeyo waqtiga oo dhan (marka loo eego IMDb) magacaabista Emmy ee qorista cajiibka ah. Dadka dhaleeceeya Natalia, si kastaba ha noqotee, way ka yar yihiin kuwa taageereyaashaagii caadiga ahaa - maxaa yeelay iyadu runtii waxay ahayd jilaa door muqaddasnimo ah.
Natalia, oo ciyaaray taxanaha Osha ee taxanaha, ayaa qirtay . ] Yahoo Waqtiga su'aasha ee khamriga cad bayaankiisa in ay dareentay fiicnaan saddexdii qaybood ee ugu horreeyay xilligii 8. Waxay si gaar ah uga cabanaysaa qoraalkii intaas ka dib, iyadoo xustay, in kastoo ay u muuqato inay tahay sidii showga ay isu soo bandhigeen dad gebi ahaanba ka duwan dhamaadka.
"Kadib (Dagaalkii Jiilaalka) ... maan fahmin," ayay tidhi. Xalka qoraalka ee dhamaadka, waxyaabaha xiisaha leh iyo wax walba oo socda iyo sida loo duubay ee la xiriira xilli kasta oo kale, macno malahan, waxay dareemayaan inay qoreen dad kala duwan. . Aniga ahaan taasi taasi macno malahan. "
Isha Sawirka: Sawirka Zengel Dirk / Press Press / Shutterstock
Waa inaan ku darnaa digniinta Natalia ay qiratay inay sakhraansan tahay markay daawaneysay, laakiin taasi taasi ma beddeleyso xaqiiqda inay ku saxsan tahay lacagta. "Waan jeclaa ilaa daqiiqada (Arya) qalbigayga (boqorka habeenki) uu qalbigayga ku garaaco - illaa iyo hadda waan ka helay," ayay tiri. Annagana, Natalia, iyo sidoo kale.
Dhab ahaantii tani waxay ka hor imaanaysaa faallooyinka dhawaanahan ee jilayaasha kala duwan ee carshiyo oo falcelin sameeyay kadib markii uu dhaleeceeyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, jilaaga Varys Conleth Hill oo aad u dhalleeceeya weeraradii lagu qaaday " olole nacayb oo ay hogaaminayaan warbaahinta Intii lagu jiray Comic-Con. Ha rumeysanina inaan u uruursaneyno waxyaabo aan loo baahnayn - tixgeli tan mid xusuusinta fudud in taxanaha iyo gaar ahaan xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ay ku soo noqon doonaan bartilmaameedka bisha soo socota, maaddaama bandhiggu uu yahay mid rikoor-jab ah. Magacaabista 32 ee 71e Annual Primimes Emmy Awards waxaa loo qorsheeyay 22 Sebtember.
Xilliga 'Wiilasha' 2 Xilliga horeba waa ay soo jireenayeen - halkan waa aragtidaada koowaad - BGR
La reine a le cœur brisé: comment trois des quatre enfants de Queen’s lui ont brisé le cœur – Annus horribilis